China PU Coated ထည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Jiashun
ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များအတွက်စတိုးဆိုင်များတွင် PU ချည်ထည်များရှိသည်။ PU coated ထည်သည်အများအားဖြင့် polyester (သို့) နိုင်လွန်ပစ္စည်းများဖြင့်ရေစိုခံ polyurethane အပေါ်ယံပိုင်းသုတ်လိမ်းထားသောထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ polyurethane အပေါ်ယံပိုင်းသည်အခြေခံထည်၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ထည်ကိုရေဒဏ်ခံနိုင်သည်၊ အလေးချိန်ပေါ့ပြီးညှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်များကိုအိတ်လုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအိတ်များ၊ အလွန်အမင်းရာသီဥတုအိတ်များအတွက်အသုံးပြုနေသည်။
၂။ ဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ PI လက်ခံရရှိပြီးနောက် 30% သိုက်သို့မဟုတ် Open LC ကိုပေးဆောင်ပါသည်
9. Supplier သည်မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးပို့ပြီး၊
3. LT အချိန်ကုန်?
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပမာဏပေါ်အခြေခံပြီးများသောအားဖြင့်7~ 30 ရက်။
နောက်တစ်ခု: ရောနှော silicone တိပ်